China Face mask KS-9008 fekitori nevagadziri | Gubang
Iyo N95 mask ine kusefa inoshanda inopfuura 95% yezvimedu zvine aerodynamic dhayamita ye0.075µm±0.02µm. Iyo aerodynamic dhayamita yehutachiona hwemhepo uye fungal spores inonyanya kusiyana pakati pe0.7-10 µm, iri zvakare mukati mekudzivirira kweN95 masks. Naizvozvo, iyo N95 mask inogona kushandiswa kudzivirira kufema kwechimwe chinhu, senge guruva rinogadzirwa panguva yekukuya, kuchenesa uye kugadzira zvicherwa, hupfu uye zvimwe zvinhu. Inokodzera zvakare mvura kana isina mafuta isiri-oiri inogadzirwa nekupfapfaidza. Particulate nyaya inokuvadza volatile gasi. Inogona kusefa uye kuchenesa kunhuhwirira kwakafemerwa (kunze kwemagasi ane muchetura), kubatsira kudzikisira ratidziro yezvimwe zvinofemesa tupukanana tudiki (senge mold, anthracis, tuberculosis, nezvimwewo).
Kusvibiswa Kwemhepo Pm2.5 N95 mask Kn95 Mask ffp2 neIsina-yakarukwa Mucheka Novel Coronavirus Precaution Disposable
Inoshanda Sefita KN95 Chengetedzo Yechiso Mask: inogona kukudzivirira kubva kuguruva, kubuda kwemota, mukume, mhute, madonhwe, inoshandawo kune Exhaust, maindasitiri emission, Dust allergies, PM2.5.etc & Ergonomic Dhizaini: iyo N95 Safety Mask Inogadzikana kupfeka, yakaderera impedance sefa zvinhu zvisina kunhuwa
& Inokodzera marudzi ese ezviitwa zvekunze. se: Kukwira bhasikoro, Kumhanya, Kutasva Bhiza, Snowboarding, Kumhanya-mhanya, Kukwira, Kuchovha, Kufamba, Midhudhudhu, etc.
Zvakanakira zvedu CE KN95 Isina-yakarukwa Inoraswa Chiso Mask Earloop:
pfuura bvunzo dzakasiyana uye unogona kutarisa ruzivo pane yehukama webhusaiti, chinangwa chekuvaka yedu yakanakisa mhando
isu tinogona kuve nechokwadi chekutungamira nguva uye maitiro ezvigadzirwa anogona kuita zvinodiwa zviri nani. Tikugashirei kukutumira chirongwa chekuda.
3.Patent Yakachengetedzwa dhizaini,
zvigadzirwa zvedu zvine dhizaini yedu, yakachengetedzwa nemirairo patent, tinogona kuve nechokwadi chemhando yezvigadzirwa zvedu zveN95 mask.
4. 100 zviuru zvekirasi Yakachena Kamuri uye zviuru gumi zvekirasi laboratori,
isu tine midziyo yehunyanzvi uye yakanyatso kudzora mhando uye tinogamuchirwa kuishanyira.
5.Yakazvimirira R&D uye dhizaini (R&D=tsvagiridzo nekusimudzira)
Zvakapfuura: Kumeso kwemasiki KN95
Zvinotevera: Kumeso mask KS-9005
Fp2 Kn95 Face Masks
Ffp2 Dziviriro Kn95
Ffp2 Dziviriro Mask Kn95
Ffp2 Dziviriro Masiki Kn95